Wood click isaPVC decorative tile with wood design and texture produced by high pressure impact process. Featuring with unilin patterned technologies ,making installation fast and simple in all possible ways. It benefits from PU polyurethane surface treatment ,making maintenance easier and eliminating the need of initial coat for light traffic area.
Place Recommended- Housing , Healthcare , Hospital ,Clinic, Office Administration ,Education, Hotel ,Restaurant ,Retail.
100% ရေစိမ်ခံဗွီနိုင်းကြမ်းခင်းသည် ဖိအားဒဏ်ခံနိုင်စေရန် ထုတ်လုပ်ထားသော မျက်နှာပြင်ရှိပြီး သစ်သားပုံစံ မျိူးဖြင့် PVC အလှဆင်ထားသည့် ကြမ်းခင်းတစ်မျိူးဖြစ်သညသ်။ Unilin ကလစ် အမျိူးအစားကြောင့် တပ်ဆင်မှုမြန်ဆန်အောင်ပြုလုပ်ထားရာ မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို တပ်ဆင်ရ လွယ်ကူအောင် ပြုလုပ်ထား ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ PVC Vinyl ကြမ်းခင်းကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် မျက်နှာပြင် ကို PU ပေါ်လီယူရီသိန်းဆေး သုတ်လိမ်းပေးခြင်း ၊သန့်ရှင်းထိန်းသိမ်းရ ပိုမိုလွယ်ကူစေ ခြင်း တစ်ခြားကြမ်းခင်းများထက် တပ်ဆင်ရပိုမို လျင်မြန် လွယ်ကူခြင်းစသည့် လိုအပ်ချက်ကို ဖယ်ရှား ပေးခြင်း အစရှိသည့် အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိစေမှာ ဖြစ်သည်။
တိုက်ခန်း၊ ကျန်မာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာနေရာ၊ ဆေးရုံ ၊ ဆေးခန်း၊ အုပ်ချူပ်ရေးရာဆိုင်ရာရုံးခန်း၊ ပညာရေး ဆိုင်ရာနေရာ၊ ဟိုတယ်၊ စားသောက်ဆိုင်၊ အရောင်းဌာနအစရှိသည့်နေရာများတွင် တပ်ဆင်ရန် ကောင်းမွန် ကြောင်း၊ အကြံပြုထောက်ခံလိုပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ အမှန်တကယ်ကြမ်းခင်းချပ်သည် အရောင်အနု၊အရင့် catalogueမှပုံများနှင့် အနည်းငယ် ကွာခြားမှုရှိနိုင်ပါသဖြင့် ကျေးဇူးပြု၍ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် အရောင်းဌာနတွင် နမူနာ ပုံစံအမှန်ကိုကြည့်၍ ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။
Size - 5.5”X 48”
Thickness - 4~5mm
Surface - Embossed Surface
Note: Shades and colors may vary slightly from actual tiles, please request actual sample from Marketing and Sales Deparment.